खुर्सानी खादाका फाईदा र बेफाइदा के के हुन्, जानी राख्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
सामान्यतया चिल्लो र पिरो खानेकुरा नखान विज्ञहरुले सुझाब दिँदै आएका छन् । चिल्लो तथा पिरो पेटमा समस्या आउने र अल्सर बनाउने साबधानी दर्शाउँदै आएका छन् ।
रातो खुर्सानीले पेटमा ग्याँस्ट्रिकको समस्याबाट केही हदसम्म जोगाउँछ । पिरो खानेकुराले तौल घटाउनेदेखि शरिरलाई न्याने बनाउन र शरिर भित्रका रक्तनलीलाई सफा बनाउन खुर्सानी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
खुर्सानीको विशेषता पिरो र तातो हो । यसले शरिरलाई चिसो हुनबाट जोगाउँछ । चिसो पेट फुलेको वा डम्म भएको छ भने खुर्सानी राखेका तरकारीले शरिरलाई फाइदा गर्छ ।
Topics #खुर्सानी #फाईदा #बेफाइदा
Don't Miss it वैवाहिक जीवन खुसि बनाएर राख्नको लागि पिउनु होस् सजिवनको सुप
Up Next (भिडियो) काखी सार्है गनाउछ ? यसो गर्नुहोस, यो उपाय अपनाउनुहोस कहिल्यै गनाउदैन !!